Food – Shwemyanmar
စပိန်စတိုင်လ် ခရမ်ဘယ်ရီ ပန်းသီးရှာလကာ Sangria ပန့်ခ်ျဖောက်ကြမယ် Sangria ဆိုတာ စပိန်ပန့်ခ်ျဖျော်ရည်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဝိုင်နီထဲမှာ ရာသီပေါ်သစ်သီးလေးတွေ ရောယှက်ပြီး သောက်သုံးရတဲ့ အဖျော်ယမကာတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ရာသီမရွေး သောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။ Sangria ဆိုတာ စပိန်ပန့်ခ်ျဖျော်ရည်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဝိုင်နီထဲမှာ ရာသီပေါ်သစ်သီးလေးတွေ ရောယှက်ပြီး သောက်သုံးရတဲ့ အဖျော်ယမကာတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ရာသီမရွေး သောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။ ပါတီပွဲတွေ၊ ကမ်းခြေညစာစားပွဲတွေ၊ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေမှာ လူကြိုက်များသူတစ်ဦးဖြစ်ချင်ရင် Sangria ပန့်ခ်ျဖောက်နည်းလေး သိထားဖို့တော့ လိုမယ်နော့။ ဒီနေ့ ဖော်ပြပေးမယ့် Sangria ကတော့ ခရမ်ဘယ်ရီ ပန်းသီးရှာလကာ Sangria ဖျော်စပ်နည်းလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစပိန်စတိုင်လ် ပန့်ခ်ျလေးဟာ မချိုလွန်း၊ မချဉ်လွန်းတဲ့ အရသာရှိပြီး လတ်ဆတ်တဲ့ သစ်သီးတွေနဲ့အတူ ထူးခြားတဲ့ အရသာကို တွေ့ထိခွင့်ရမှာပါ။ ပါဝင်ပစ္စည်းများ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကတော့ (၇၅၀) […]
Posted inFoodLeaveaComment on စပိန်စတိုင်လ် ခရမ်ဘယ်ရီ ပန်းသီးရှာလကာ Sangria ပန့်ခ်ျဖောက်ကြမယ်
စားဝတ်နေရေးပြေလည်စေဖို့ တပိုင် တနိုင် တောင်ပို့ ”မှို”ဖောက်နည်း လေးကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်
Posted inFood, သုတရသLeaveaComment on စားဝတ်နေရေးပြေလည်စေဖို့ တပိုင် တနိုင် တောင်ပို့ ”မှို”ဖောက်နည်း လေးကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်
မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့မီးဖိုချောင် ထဲမှာ အတွေ့ရများတဲ့ ဘူးသီး ဟာ သွေးတိုးကျစေတဲ့ အစွမ်းနဲ့ နှလုံးရောဂါ သက်သာစေတဲ့ အစွမ်းရှိတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဘူးသီးကို ဟင်းခါး အဖြစ် ကျိုချက် သောက်သုံးကြသလို ဘူးသီးကို ပြုတ်ပြီး တို့စားတာ၊ သုပ်စားတာမျိုး လည်း ပြုလုပ်ကြပါ အသည်း ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ဟန်ချက်ညီစေပါတယ် ဘူးသီးမှာ ပြည့်ဝဆီနဲ့ ကယ်လိုရီ ပါဝင်မှု နည်းပါတယ်။ အမျှင်ဓာတ်၊ ဗီတာ မင်စီ၊ ရိုင်ဘိုဖလေဗင်၊ ဇင့်(သွပ်)၊ သိုင်ယာ မင်၊ သံဓာတ်နဲ့ မဂ္ဂနီဆီယမ် တို့ ပါဝင်မှု များပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသည်း ကို သန့်စင် စေတာ၊ ပြန်လည် အားဖြည့်ပေးတာနဲ့ အယ်လ်ကိုဟောကြောင့် ထိခိုက်မှုကို […]
Posted inFood, ​ဆေးနည်​များLeaveaComment on လူသိနည်းတဲ့ ဘူးသီး ရဲ့ ကျန်းမာရေး အစွမ်း
သံပုရာသီး ဖျော်ရည်သောက်တိုင်း သံပုရာအခွံကိုပါ ထည့်သွင်းသောက်ကြစို့
သံပုရာသီး ဖျော်ရည်သောက်တိုင်း အရည်ဘဲ ညှစ်ပြီး အခွံတွေကို လွှတ်ပစ်လေ့ရှိပါသလား။ ဒါက သင်တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး၊ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ သန်းပေါင်းများစွာသော လူတွေက ဒီလို အမှားမျိုး လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ သံပုရာသီးက ကျန်းမာရေးအတွက် အရေးကြီးဆုံး အစားအစာလို့ ပြောဆိုနိုင်ပြီး သူ့မှာ ဗီတာမင် C၊ သံဓာတ်၊ ကော့ပါး၊ ကယ်စီယံ၊ မဂ္ဂနီစီယမ်၊ ပိုတက်စ်စီယမ် နဲ့ တခြား အဟာရများစွာ ပါဝင်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအာဟာရများစွာကို အကုန်လုံးနီးပါး ရရှိဖို့ ဘယ်လို စားသုံးရမလဲဆိုတာတော့ မသိကြပါဘူး။ သံပုရာသီး အခွံမှာပါဝင်တဲ့ ဓာတ်တွေက အသီးမှာပါဝင်တဲ့ ဓာတ်တွေထက်တောင် ပိုပြီး အကျိုးရှိတယ်လို့ အဟာရပညာရှင်တွေက ပြောကြပါတယ်။ ပြုလုပ်ရမည့် နည်းလမ်း သံပုရာသီး ဖျော်ရည်ကို ဖျော်မယ်ဆိုရင် ဖန်ခွက်တစ်လုံးထဲကို သံပုရာသီးတွေကို အရည်ညှစ်ပြီး […]
Posted inFood, ​ဆေးနည်​များLeaveaComment on သံပုရာသီး ဖျော်ရည်သောက်တိုင်း သံပုရာအခွံကိုပါ ထည့်သွင်းသောက်ကြစို့
ထမင်းစားမြိန်​​စေမယ့်​ ပဲကုလားဟင်း​ကောင်း​ကောင်း ချက်နည်း ပါဝင်ပစ္စည်းများ ကုလားပဲခြမ်း- ၁၀ ကျပ်သား အာလူး – ၃ လုံး ခရမ်းသီး – ၂ လုံး မုန်လာဥ – ၁ လုံး ဒန်.သလွန်သီး – ၂ တောင့် ကြက်သွန်နီ – ၂ လုံး ကြက်သွန်ဖြူ – ၅ မွှာ ငရုတ်သီးအနီတောင့်- ၅ တောင့် ဆီသတ်ရွက်- ၂ ခက် ဆီ ၊ ဆား ကြက်သားမှုန်. ငရုတ်သီးမှုန်. နနွင်းမှုန်. မန်ကျည်းရည် ဒန်ပေါက်မဆလာ ချက်ပြုတ်နည်း အရင်ဆုံး ကုလားပဲခြမ်းကို တစ်ညရေစိမ်ထားပါ။ အာလူး၊ခရမ်းသီး၊မုန်လာဥ၊ဒန်.သလွန်သီး၊ကြက်သွန်နီ၊ကြက်သွန်ဖြူတို.ကို ရေဆေးလှီးပြီး ငရုတ်သီးမှုန်.၊နနွင်းမှုန်.၊ဆား၊ကြက်သားမှုန်.နဲ.နယ်ထားပါ။ ပြီးရင် ဒန်အိုးထဲ ရေလိုသလောက်ထည့်ပြီး […]
Posted inFoodLeaveaComment on ထမင်းစားမြိန်​​စေမယ့်​ ပဲကုလားဟင်း​ကောင်း​ကောင်း ချက်နည်း